တပ်မတော်သား အချို့ အသတ်ခံရမှု ကေအိုင်အေထံ အစိုးရ ဖြေရှင်းချက်တောင်း | အွန်လိုင်းကျေးရွာ
> မြန်မာပြည်သတင်း > တပ်မတော်သား အချို့ အသတ်ခံရမှု ကေအိုင်အေထံ အစိုးရ ဖြေရှင်းချက်တောင်း
Posted on Monday, September 16, 2013 |4Comments
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင် မချမ်းဘောမြို့ အနီးတွင် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် လူစုကွဲပြီး ဖမ်းဆီးခံရသည့် အမှတ် (၁၃၇) ခြေလျင်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီး ဇော်မျိုးထက်ကို ကေအိုင်အေက သတ်ဖြတ်မှုအပေါ် အစိုးရက ကေအိုင်အေထံ ဖြေရှင်းချက် တောင်းဆိုထားကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။
ယင်းတိုက်ပွဲတွင် ဗိုလ်ကြီးနှင့် အခြားစစ်သည်နှစ်ဦး ကျဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ပြီး ယင်းကိစ္စတွင် တာဝန်ရှိသူကို ကေအိုင်အေက ဖော်ထုတ် အရေးယူပေးရန် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီမှတစ်ဆင့် တောင်းဆိုထားသော်လည်း လက်ရှိအချိန်ထိ တရားဝင် ပြန်ကြားချက် မရရှိသေးဘဲ မီဒီယာ တချို့တွင် ငြင်းချက်ထုတ် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် သဘောတူ ထားသည့် ကေအိုင်အေ၏ သတ်မှတ်နေရာ ပြင်ပသို့ ကေအိုင်အေအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ဆက်ကြေး လာကောက်သည်ဆိုသည့် သတင်းအရ ဗိုလ်ကြီးဇော်မျိုးထက်အပါ အဖွဲ့ဝင် ၁၄ ဦးပါသည့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းက သွားရောက် စစ်ဆေးစဉ် ကေအိုင်အေက မိုင်းခွဲ၍ ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗိုလ်ကြီးဇော်မျိုးထက် လက်မောင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိကာ လူစုကွဲပြီး အနီးနား ရွာတစ်ရွာသို့ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ရောက်ရှိရာ ကေအိုင်အေအဖွဲ့က လာရောက် ဖမ်းဆီးကြောင်း၊ ဒဏ်ရာဖြင့် အသက်ရှင်လျက် ဖမ်းဆီးသွားခြင်းဖြစ်ပြီး ရွာအပြင် တောတွင်း၌ ခေါင်းဖြတ်သတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဦးရဲထွဋ်က ရှင်းပြသည်။
“တပ်က ပြန်လိုက်ရှာတဲ့အခါ ခေါင်းပြတ်နေတဲ့ ဗိုလ်ကြီးရဲ့ အလောင်းကိုတွေ့တော့ သေချာသင်္ဂြိုဟ်ပေးခဲ့တယ်။ သူတို့က ဒီတိုင်းမြေနဲ့ယက်ပြီး ဖုံးပစ်ခဲ့တာ” ဟု ၎င်းကဖွင့်ဟသည်။ ယင်းလုပ်ရပ်သည် ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီမှု မရှိဘဲ တိုက်ပွဲများ အရှိန်လျှော့ချရန် သဘောတူထားချိန်တွင် မိမိနယ်မြေ ပြင်ပကို လာရောက်ပြီး ယင်းသို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းမှာ မသင့်လျော်သည့် လုပ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ “ဗိုလ်ကြီးမျက်နှာက ရစရာမရှိဘူး။ ဓားနဲ့မွှန်းထားတယ်။ ပြီးတော့ ဗိုက်ထဲကို ခေါင်းထည့်ထားတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
တိုက်ပွဲဖြစ်သည့်နေရာမှာ ကေအိုင်အေနယ်မြေ မဟုတ်သည့် အပြင် ပြည်သူလူထုအပေါ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သည့် ဆက်ကြေး ကောက်ခံမှုမျိုး မပြုလုပ်ရန် သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ကြောင်း၊ ထို့အပြင် ယင်းသို့ လူမဆန်သည့် သတ်ဖြတ်မှုမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို လွန်စွာထိခိုက် နစ်နာစေသည့် လုပ်ရပ်ဖြစ်သည့် အတွက် ကေအိုင်အေအဖွဲ့၏ ဖြေရှင်းချက်ကို စောင့်ကြည့် တုံ့ပြန် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားသည်။ ယင်းကိစ္စကို ကေအိုင်အိုသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ကေအိုင်အေအနေနှင့် ယင်းသို့ သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေ အဖွဲ့၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်က ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရက တရားဥပဒေ ဘောင်အတွင်းမှ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မြစ်ကြီးနား တွင် မေလ ၃၀ ရက်နေ့က နှစ်ဖက် သဘောတူညီထားချက်များ အရ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများ ထိန်းသိမ်းလျှော့ချရန် သဘောတူထားကြောင်း မြန်မာ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှ အကြီးတန်း အကြံပေးတစ်ဦးက ဆိုသည်။ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့် ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့ အထိ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် တွေ့ဆုံရန် စီစဉ်ထားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေး ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ လုပ်ငန်းကော်မတီက ပြောကြားထားသည်။
Here is my web-site; heated cat house for winter
Also visit my blog post; Prosolution Pills
, applications that assist associating to twitter, orkut, social bookmarking and
many more. Playable in multiple languages, feel the pride and passion of the game loved around the globe.
Android apps give perfect solution to finish quickly office work.
Here is my homepage :: Respawnables Hack
if that serious noesis and promotingaunary, specialised keyword, place threefold articles to
this accepted. If you book the stuff inside 30 written account.
Act forthwith when you play trading. Whether or
not you're loss to wrick and storage yourself to be beable to real estate the job of
his fur Custom iPhone4Cases Custom iPhone5Cases Custom iPhone5Cases Custom iPhone4Cases Custom T-Shirts Custom iPhone4Cases that can easily
use this skillfulness. ending and ask to find the hazard levels of their signs in either
an natural event as causal agent who genuinely translate and can beacracking give
if it is too gimcrack, or any one of uppercase provoke to you.
Feel free to visit my web site: Custom iPhone Cases
အွန်လိုင်းကျေးရွာ. Powered by Blogger.
ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင် မချမ်းဘောမြို့ အနီးတွင် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် လူစုကွဲပြီး ဖမ်းဆီးခံ...
လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ဆယ်ကျော်သက် ဘ၀က ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးတွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိခဲ့ ကြမယ် ထင်ပါတယ်။ တခိျု့လည်း ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ...
လတ်တလော ရန်ကုန် ကားဈေးနှုန်း
. ဟံသာဝတီကားဈေးကွက် (ရန်ကုန်) ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ကားဈေးနှုန်းများ ၂၀၀၂ မော်ဒယ် တိုယိုတာ Mark II(ဓာတ်ဆီ) (၅ဃ) (ကျပ်) ...
ရည်းစားဦးကြောင့် စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ သက်မွန်မြင့်
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးရေး ရန်ပုံငွေ ပဒေသာကပွဲမှာ ‘ရည်းစားဦး’ သီချင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေခဲ့ တာကတော့ သက်မွန်မြင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆို ဝါသနာ ...
နေ့စဉ် ကျွန်မတို့ လုပ်မိကြတဲ့ တ ချို့အပြုအမူတွေကြောင့် အလှအပကို ထိခိုက် စေတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် အဲဒီလို ပြဿနာတွေ မဖြစ်စေ ဖို့ ...
အရွယ် တင်နုပျို လိုသူတိုင်း ညဘက် လုပ်သင့်သည့် အသား အရေ ထိန်းသိမ်းနည်း
တစ်နေ့လုံး အလုပ်မှာ ပင်ပင် ပန်း ပန်း လုပ်ခဲ့ရ၊ ကလေး တွေကို ထိန်းခဲ့ ရ၊ ကြမ်းတမ်း တဲ့ ပတ်ဝန်း ကျင် အခြေအနေ နဲ့ ထိတွေ့ခဲ့ရ.. ဒီလိုအချက်တေ...
သီချင်း အေးအေးလေးတွေ ကိုပဲ အမြဲ ဆိုဖြစ်နေတဲ့ ဖိုးကာက အခု လတ် တလောမှာ သူ့ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် အခွေဖြစ်တဲ့ "အိပ်မက် (၁)အိပ်မက်(၂)"...
စိုင်းစိုင်းဇာတ်ကားမို့ မကြည့်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ သူတွေနဲ့ စကားပြောချင်တယ် ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် က ရုပ်ရှင် ကားကြီး တစ်ကား ရိုက်ဖို့ ရှိတာ ကြောင့် ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်တာ နားထားပြီး နောက်ထွက်မယ့် သူ့ရဲ့ အခွေ အတွက် ပြင...
မင်းသား ၆ယောက်၊ မင်းသမီး ၆ယောက်နဲ့ ဟာသ ကားကြီး ရိုက်မယ့် ဒါရိုက်တာ သားညီ
သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ သားညီ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ 'သူမသည် မျောက် တစ်ကောင် ဖြစ်သည်' ဒီဗီဒီဇာတ်ကားကို လာမယ့် ၂ဝ၁၃ခုနှစ် မတ်လလောက်မှာ ရုံတင...
ဒွေးဝင်စားတာမှန်ရင် လူမြင်ရုံနဲ့ သိပါတယ် ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း
ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်းကို အနုပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်း အရာများ စပ်စု မိတဲ့အခါ.... ဦးမျိုးမင်း ရိုက်ကူးတဲ့ 'အမည်ခံချစ်သူ' ဇာတ်က...
သီချင်းစာမျက်နှာ - ၃
သီချင်းစာမျက်နှာ - ၄
သီချင်းစာမျက်နှာ - ၅
သီချင်းစာမျက်နှာ - ၂
သီချင်းစာမျက်နှာ - ၁
Flash Songs လုပ်နည်း
Myanmar E-Book Net
စံကားဖြူ ... - ညက မအိပ်ခင် စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်မယ်စိတ်ကူးမိတာနဲ့ ဆရာမ #ဂျူး ရဲ့ # ချစ်သူလား_စကားတစ်ပွင့်_ပွင့်ခဲ့တယ် ကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အတိအကျမပြောတတ်တော့ပေမယ့် ဒီစာအုပ်ကို ပထ...
ပြောင်းလဲပေးဖို့ အချိန်တန်ပြီ - ၂၀၁၅ခုနှစ်ကတော့ အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာ ပါးစပ်ဖျားမှာ ပြောစမှတ်တွင်ခဲ့ပြီ။စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်ပါနိုင်ခဲ့ ပြီ။လူအများစုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ ဖြစ်တည်မှုတစ်ထပ်တည်း ကျခဲ့ပြီ။ေ...
နေအိမ်ကိုပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆိုတေးကို သတင်းသွားမေးကြသူအနုပညာရှင်များ - ယာဉ်မတော်တဆမှု ကြောင့် မန္တလေးပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှု ခံယူ ခဲ့တဲ့ ဆိုတေးက ကျန်းမာရေး တိုးတက်ကောင်း မွန်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာတော...
တပ်မတော်သား အချို့ အသတ်ခံရမှု ကေအိုင်အေထံ အစိုးရ ဖြေရှင်းချက်တောင်း - ကချင်ပြည်နယ် ပူတာအိုခရိုင် မချမ်းဘောမြို့ အနီးတွင် တပ်မတော်နှင့် ကေအိုင်အေတို့ သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားစဉ် လူစုကွဲပြီး ဖမ်းဆီးခံရသည့် အမှတ် (၁၃၇...
ကျမနှင့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမတို့မိသားစုအကြောင်း - *မထင်မှတ်ထားတဲ့တစ်နေ့မှာပေါ့ သူမနဲ့ကျမ ရေစက်စုံဖို့ အကြောင်းဖန်လာတယ်… သူမကိုကျမတစ်ခါမှ * *မမြင်ဖူးခဲ့ပါဘူး ဒါပေမယ့် သူမကိုအရမ်းရင်းနှီးနေသလိုမျိုး ကျမစိတ်...
Scribd.com က စာအုပ်တွေ ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် - ကျွန်တော် အဲဒီဆိုဒ်က စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အရမ်းလိုချင်နေတာလေ .... ဘယ်လိုဒေါင်းဒေါင်း ဒေါင်းလို့မရဘူး အကူညီတောင်းတာလည်း ဘယ်သူမှလည်း မကူညီဘူး :( ဒါပေမယ့် ကျွန်တော...
EximiousSoft.Logo.Designer.v2.58.Cracked & Portable...! - *မင်္ဂလာပါ...!* * ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ * EximiousSoft Logo Designer* လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အရင်တင်ထားတဲ့လင့်က သေသွားလို့ပြန်ပြီး တင်ပေးလိုက်တာပါ...!* Crac...
သတင်း - စာရေးသူရဲ့အခုလက်ရှိဘလော့ဂ်သည် (၆.၇.၂၀၁၂) ကခဏပျောက်ဆုံးခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူနောက်ထပ်ဘလော့ထပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအသစ်လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ်မှာပဲ ပို့စ်အသစ်...